भाइ यूसेफ नदरखनीको दोस्रो पत्र | Nepali Christians
August 11, 2014 2:46 pm by: Admin Category: Testimonials A+ / A-
आफ्नो मण्डलीका पवित्र जनहरूलाई उत्साह दिनलाई लेखिएको भाइ यूसेफ नदरखनीको यो अर्को पत्र हो। (फारसीबाट रूपान्तरित अङ्ग्रजी स्रोतबाट नेपालीमा रूपान्तरित)
शनिवार, जनवरी ०८, २०११
परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तपाईंहरूलाई अनुग्रह, र शान्ति।
यसकारण यति ठूलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि घेरिएका हुनाले आओ, हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ, पन्साऔं, र धीरजसँग हाम्रा सामु राखिएको त्यो दौड दगुरौं, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रूसको शासना भोग्नुभयो, र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। हिब्रू १२:१-२
जब कसैले सत्यको प्रकाशलाई व्यक्तिगत बनाउँदछ, ऊ त्यसलाई अरूहरूसित र भावी पुस्ताहरूसित बाँड्नलाई इच्छुक बन्दछ। हामी ती व्यक्तिहरूप्रति ऋणी छौं जोहरूले विगतमा सत्यका निम्ति लडे र फलस्वरूप हामीले येशू ख्रीष्टको यस महिमित प्रकाश प्राप्‍त गर्न सक्यौं। यी विश्वासीहरूले उक्त प्रकाशको प्रशस्तता र सुन्दरतालाई बुझेका थिए र उक्त प्रकाशको फललाई हस्तान्तरण गर्नलाई लड्न तयार थिए।
हामीले पनि अनन्त जीवनका लागि कसरी त्यस्तै फल फलाउन सक्छौं त? प्रथमतः हामीले अन्धकारको आवाजप्रति आफ्ना कानहरूलाई बन्द गर्नुपर्दछ जसरी पहिलो भजनमा लेखिएको छ:
धन्य हो त्यो मानिस, जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिँदछ, न ता गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। भजनसङ्ग्रह १:१
दोस्रो कुरा, हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा बोलिरहनुभएका आत्माको आवाज सुन्नलाई आफ्ना कानहरूलाई खुल्ला राख्‍नुपर्छ, जसरी लेखिएको छ:
तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ, र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। भजनसङ्ग्रह १:२ यस जीवनमा स्थिरता हुनु र अरूका जीवनमा उनीहरूले फलाएका अनन्त फल हुनु नै उहाँको जीवनदायी वचनद्वारा प्रभुसितको सङ्गतिको फल हो, जसरी पवित्रशास्त्रहरूले भन्दछ:
तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रूखझैं हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ; उसको पातपनि ओइलिनेछैन; अनि उसले जे गर्दछ, त्यो सफल हुनेछ। भजनसङ्ग्रह १:३
धेरैजना मानिसहरू येशूलाई पुस्तौं-पुस्तौं अनुसरन गरिनलाई एक अद्वित्तीय नमुनाको रूपमा उहाँको सराहना गर्छन् अनि धेरैजना मानिसहरू उहाँजस्तै हुने इच्छा गर्छन्। येशू सराहना गरिनलाई होइन तर पछ्याउनलाई एउटा सिद्ध नमुना दिनलाई आउनुभयो। यदि हामी उहाँजस्तै हुन चाहन्छौं भने हामीले पत्रुसले जस्तै विश्वासको पाइला चाल्नुपर्छ। जब ती प्रेरितले आफ्ना प्रभुलाई भयङ्करसित विचलित त्यस समुद्रमाथि हिँडिरहेका देखे, उनले उहाँकहाँ आउनलाई अनुमति मागे। येशूले भन्नुभयो: “आऊ!”
प्रभुलाई पछ्याउन इच्छुक बन्ने हरेकले कुनै न कुनै तवरले हेराइमा उक्त जोखिमपूर्ण आज्ञालाई सुनेको हुनुपर्छ: “आऊ!” एउटा यस्तो आज्ञा जसले विश्वासको कदमको अपेक्षा गर्दछ, जसलाई कहिलेकाहिँ “विश्वासको हामफलाइ” भनेर भन्ने गरिन्छ। पवित्र शास्त्रहरूबाट यो स्पष्ट छ, जुन कुरा हामी देख्‍न सक्छौं त्यो विश्वास होइन, किनभने बाइबलीय विश्वासलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ: “अब विश्वासचाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो।” परमेश्वरको सामर्थ्यको अनुभव गर्ने हो भने हामीले “बाबजुद” निर्णय गर्नुपर्छ। तर हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि सबै कुरा परमेश्वरको वचनअनुसार गरिनुपर्छ। उनले डुङ्गालाई छोडेर जाने निर्णय गरेकाले पत्रुसले पानीमा हिँड्ने सम्भावनालाई अनुभव गरेका होइनन् तर वचनको कारणले हो, प्रभुको आज्ञाको कारणले हो।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई “सङ्कष्ट” र उहाँका नामका निम्ति अनादर सहने कामको “अपेक्षा गर्नुपर्छ” भनेर बताउँदछ। हाम्रो ख्रीष्टियन स्वीकार ग्रहणयोग्य छैन यदि हामीले यस कुरालाई बेवास्ता गर्दछौं, यदि हामीले हाम्रा सङ्कष्टहरूमा प्रभुको धैर्यतालाई प्रकट गर्दैनौं। यस कुरालाई बेवास्ता गर्ने जोकोही त्यस दिनमा शर्माउनेछ।
हामी याद गरौं, कहिलेकाहिँ विश्वासको हामफलाइले हामीलाई कतिपय विकट परिस्थितिहरूतिर डोर्‍याउँछ। जसरी वचनले मिश्रदेशलाई छोडेर गइरहेका इस्राएलका सन्तानहरूलाई लाल समुद्रको विकट स्थानमा पुर्‍यायो। यी विकट स्थानहरू परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू र तिनको प्राप्‍तिका मध्यवर्ती स्थानमा हुन्छन् अनि तिनीहरूले हाम्रो विश्वासलाई चुनौती दिन्छन्। विश्वासीहरूले यी चुनौतीलाई आफ्नो आत्मिक दौडको एउटा भागको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। कलवरीमा परमेश्वरका पुत्रलाई सबभन्दा कठीन तरिकाले चुनौति मिलेको थियो, जसरी पवित्र शास्त्रहरूमा लेखिएको छ,
“उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई-कराई र आँसु बहाई-बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र विन्तीहरू चढाउनुभयो; अनि उहाँको भक्ति-भयको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो; उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, र पनि आफूले दुःख भोगेका कुराहरूबाट उहाँले आज्ञापालन गर्न सिक्नुभयो।” हिब्रू ५:७-८
कलवरीमा हाम्रा प्रभुका दुःखहरूलाई व्यक्त गर्न “एली, एली, लामा सबकथनी?” को चित्कार पर्य‍ाप्‍त छ। आपत्तिको उक्त चित्कारको पछाडि, हामीले त्यहाँ रहेको ठूलो विश्वासलाई औंल्याउन सक्छौं जसले उहाँलाई पिताको इच्छालाई स्वीकार गर्न डोर्‍याएको थियो। हो, परमेश्वरले “आफ्नो पवित्र जनलाई सड्न दिनुहुनेछैन” भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। मृत्युको सामर्थ्यको पारी प्रभुले बौरिउठाइको जयवन्त सामर्थ्य देख्‍नुभयो।
विश्वासको आधारको बारेमा मैले अरू कुरा लेख्‍नु खाँचो छैन। हामीले यो कुरा याद गरौं कि सुन्दर वा पीडादायी भावनाहरूभन्दा पर, केवल तीन कुरा रहन्छन्: विश्वास, आशा र प्रेम। कस्तो किसिमको विश्वास, आशा र प्रेम रहन्छन् भनेर पक्का गर्नु विश्वासीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन कुरा हामीले वचनअनुसार प्राप्‍त गर्दछौं त्यो मात्र सदालाई रहन्छ। वचनको पवित्र बोलावटको योग्य चालमा हिँड्नलाई म तपाईंहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अरूहरू संसारका लागि र भविष्यका लागि ख्रीष्टको सामर्थ्यको गवाही होस् भन्ने हेतुले विश्वासीहरू, जो महिमाका हकवालाहरू हुन्, तिनीहरूका लागि नमुना बनून्। तपाईंको हृदयमा शङ्का उब्जाउने अन्धकारका शक्तिहरूलाई धपाउनलाई तपाईंहरू परमेश्वरको वचनअनुसार जिउनुभएको होस् भनेर म विन्ती गर्दछु। शङ्कालाई धपाउने विजयी विश्वास परमेश्वरको वचनको सुनाइद्वारा आउँछ।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षामा आधारित मण्डली मात्र रहिरहनेछ, किनकि परमेश्वरको वचनको सुरक्षाभन्दा बाहिर नाश गर्नेले नाश गर्दछ। हामी उहाँको पवित्र गवाहीलाई पालन गरौं।
ख्रीष्टमा तपाईंको भाइ,
भाइ यूसेफ नदरखनीको दोस्रो पत्र Reviewed by Admin on Aug 11 . आफ्नो मण्डलीका पवित्र जनहरूलाई उत्साह दिनलाई लेखिएको भाइ यूसेफ नदरखनीको यो अर्को पत्र हो। (फारसीबाट रूपान्तरित अङ्ग्रजी स्रोतबाट नेपालीमा रूपान्तरित) शनिवार, जन आफ्नो मण्डलीका पवित्र जनहरूलाई उत्साह दिनलाई लेखिएको भाइ यूसेफ नदरखनीको यो अर्को पत्र हो। (फारसीबाट रूपान्तरित अङ्ग्रजी स्रोतबाट नेपालीमा रूपान्तरित) शनिवार, जन Rating: 0
मेरो आत्मिकी लडाई l...मेरो जीवन गवाही – अन्जान वि.क...